फेसबुक ‘लाइक’ का कुरा
Aakar February 09, 2012
प्राय: सँधैजसो साथीहरुबाट सुनिने कुरा भनेको, ‘त्यसले दु:ख परेको कुरालाई नि लाइक गर्यो’ ! उता बस दूर्घटनामा दर्जनौँ मान्छे मरेको खबर छ, त्यो कुरा नि लाइक गरेछ, कस्तो ‘सेन्स’ नै नभएको मान्छे रै’छ ! मान्छेहरु के भा’का हुन्, जे कुरा नि लाइक गर्छन् ! अब फलानाको निधन भो भनेर, फेसबुक स्टाटस लेख्यो, मान्छेहरु त्यो पनि लाइक गर्छन् ! हैन, साँच्चै मान्छेहरुको सेन्स नै छैन कि क्या हो? मान्छेहरुले मानवियता र नैतिकता नै बिर्से कि कसो भनेर, ती मान्छेहरु माथि अरुहरुले नैतिकताको प्रश्न नै उठाउँछन् । फेसबुक लाइकको सम्बन्धमा धेरै साथीहरुबाट यस्तै यस्तै किसिमका कुराहरु सुन्न पाइन्छ ! हो पनि, दुख परेको खबर फेसबुकमा स्टाटसको रुपमा अपडेट गरेकोछ, त्यो कुरालाई पनि लाइक गरेको देख्दा अचम्म त लाग्ने नै भयो !
जहिँकहिँ यसप्रकारको कुराहरु भएको देख्छु, अनि फेसबुक लाइकको बारेमा सोच्न बाध्य हुन्छु ! प्राय: सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताले ‘लाइक’ लाई ‘मन पर्नु, मन परेको’ भनेर बुझ्ने गरेकाछन् ! अनि हामीले पहिले देखि पढ्दै आएको कुरा पनि त्यही नै हो, ‘केही कुरा मन पर्नु’लाई ‘लाइक’ भनिन्छ, वा ‘उस्तै उस्तै कुरालाई’ पनि यदाकदा ‘लाइक’ नै भन्ने गरिन्छ ! तर फेसबुक ‘लाइक’को अर्थ धेरै छ ! आफूले ‘फेसबुक लाइक’ को अर्थ बुझेको भएपनि, म अरुले दुख परेको खबर लेख्दा, म ‘लाइक बटन’ थिच्न सक्दिन, कारण अरुहरुले त, लौ यसको सड्केछ, यस्तो दुखको खबर पनि लाइक गर्यो, भन्न बेर लाउँदैनन् ! अत: आफूले मनन गरेको र बुझेको ‘फेसबुक लाइक’ सम्बन्धि कुरा आज यहाँ लेख्दैछु ! मेरो कुरा मन पर्यो भने, ब्लगको अन्तिममा रहेको ‘रिकमेन्ड’ बटन थिच्नुहोला ! (साथीहरुले लाइकको अर्थ मनपर्नु भनेर बुझ्ने भएका कारण, मैले ब्लगमा ‘लाइक’को सट्टा ‘रिकमेन्ड’ बटन राखेकोछु !)
‘फेसबुक लाइक’लाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ ! ‘फेसबुक लाइक’ भनेको मन पर्नु मात्र होइन, थाहा पाउनु पनि हो, ‘फलो गर्नु’ पनि हो, ‘सेयर गर्नु’ पनि हो । पहिले फेसबुकमा बनाइएको ‘पेज’लाई ‘फ्यान पेज’ भनिन्थ्यो तर अहिले ती ‘पेज’हरुलाई ‘बिजनेस पेज’ भनिन्छ ! हामी माझ रमाइलोको लागि दर्जनौँ फेसबुक पेजहरु बनाइएको छ ! भाउ दिने केटीलाई बाल छैन, पढ्छु पढ्छु हाँस्छु गर्दा सप्पै बिर्सेछु, बच्चै देखि स्मार्ट हो तर घमन्ड कहिले गरिन, भन्ने केही पेजहरु त ‘रमाइला पेज’का केही उदाहरणहरु मात्र हुन् ! यस किसिमका पेजहरु फेसबुकमा सयौँको सङख्यामा रहेकाछन् ! र पनि फेसबुक पेज मुख्यत ‘बिजनेस’ सँग नै सम्बन्धित छ, र अहिले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि फेसबुकमा आफ्नो ‘ब्रान्डको बिजनेस पेज’ हुनु अनिवार्य नै भइसकेकोछ ! फेसबुक पेजकै प्रभाव स्वरुप, गुगल प्लसले पनि बिजनेस पेजहरु ल्याएकोछ भने, ट्विटरले केही सिमित ब्रान्डहरुलाई बिजनेस पेज उपलब्ध गराएकोछ । ‘सोसल मिडिया मार्केटिङ’ मा फेसबुक पेजको ठूलो महत्व छ, पेजमा ‘लाइक’को सङ्ख्या बढाउन कम्पनीहरुले अनेक उपायहरु अपनाउने गरेकाछन् ! यो ब्लगमा अहिले ‘बिजनेस पेज’ पट्टि नजाउँ होला, यसको लागि एउटा बेग्लै ब्लग नै लेख्नुपर्ने देखिन्छ !
फेसबुक ‘लाइक’ले अवस्था अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ दिन्छन् ! यो ब्लगको दायाँपट्टि ‘आकारपोष्ट लाइक’ बटन छ, जसको सोझो अर्थ ‘आकारपोष्ट’ सँग जोडिनु हो ! पहिले ‘आकार पोष्ट’को फ्यान बन्नुस् भनिन्थ्यो भने, अब “आकार पोष्ट” लाइक गर्नुस् भनिन्छ ! अनि अहिलेको समयमा जुनसुकै कम्पनी/ब्रान्डले फेसबुकमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन ‘लाइक’ गर्नुस भनिरहेका हुन्छन् ! (फेसबुक लाइक कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा पछि ब्लग लेखौँला) ! कुरा त फेरि यही नै हो कि, तपाईलाई ‘आकार पोष्ट’ मन पर्छ अत: आकारपोष्ट को नयाँ नयाँ अपडेट फेसबुकमा थाहा पाउन, तपाँई “आकार पोष्ट”लाई लाइक गर्नुहुन्छ ! निश्चय पनि कुनै पनि ‘बिजनेस/फ्यान’ पेजहरु तपाईलाई मन परेरै ‘लाइक’ गर्नुहुन्छ र यति यस्ता पेजहरु पनि छन्, जुन तपाईले थाहा नै नपाइ लाइक गरिरहनु भएकोहुन्छ ! अत: कुनै पनि ‘बिजनेस पेज’लाई तपाईले लाइक गर्नुको अर्थ ‘मन पर्नु’ नै हुन्छ वा उक्त ब्रान्डको अपडेट फेसबुकमा थाहा पाउनको लागि, लाइक गर्नुहुन्छ ! अर्कातिर, ब्रान्डलाई जति धेरै लाइक भो, त्यति धेरै फाइदा भइरहेको हुन्छ, यसो भन्दैमा यो नसोच्नुस कि, लाइक धेरै हुने पेजलाई, फेसबुकले पैसो दिन्छ ! यसको आफ्नै बेग्लै कथा छ, कुनै दिन यसबारेमा पनि कुरो गरौँला !
समाचार, ब्लग आदिमा राखिने/देखिने ‘लाइक’ले बेग्लै अर्थ दिन्छ ! लाइकको सट्टमा ‘रिकमेन्ड’ बटन पनि राख्न सकिन्छ, जुन यसै ब्लगको अन्तिममा देख्नसक्नुहुन्छ ! चाहे साइट/ब्लगका सामाग्री/समाचार दुखद होस् या सुखद, यो मामलामा ‘लाइक’को अर्थ बेग्लै हुन्छ ! अहिले देशमा पेट्रोल, ग्यास नपाइएको समस्या वेवसाइट र ब्लगहरुमा पढ्न सकिन्छ अनि दर्जनौँले यही खबरलाई ‘लाइक’ गरिरहेकाछन्, यसको अर्थ ‘ग्यास नपाउँदा’ राम्रो लाग्यो, मन पर्यो पक्कै भनेको होइन ! यसको सोझो अर्थ हुन्छ, तपाईले त्यो कुरा/खबर थाहा पाउनुभयो, अनि आफूले थाहा पाएको कुरालाई “फेसबुक”मा आफ्ना साथीहरु सँग बाँड्न चाहनुहुन्छ ! सायद कतिले याद गर्नु भएको होला, अनि कतिले याद गर्नु भएको छैन होला, यो ब्लगको माथि ‘फेसबुक को सेयर’ बटन छ र यो पनि भनिहालौँ कि हिजोआज साइटमा ‘फेसबुक सेयर बटन’ राख्ने चलन छैन, यद्दपी मैले यो ब्लगमा राखिरहेकोछु ! फेसबुकले ‘लाइक’ को प्रचलन ल्याए सँगै, फेसबुकले आफ्नो ‘सेयर बटन’ हटायो, अनि प्रचलनमा आएको ‘लाइक’ ले ‘फेसबुक सेयर’ कै काम गर्न थाल्यो ! अत: समाचार, ब्लग आदिमा देखिने ‘लाइक’ को अर्थ हुन्छ, आफूलाई मन परेको वा मन लागेको कुरा, फेसबुकमा सेयर गर्नु ! तपाईले यो ब्लग, माथिको सेयर बटन थिचेर आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्दा पनि हुन्छ वा तल रहेको ‘रिकमेन्ड’ बटन थिचेर सेयर गर्दा पनि हुन्छ । आफूलाई मन परेर फेसबुकमा सेयर गर्नु पनि लाइक नै हो, अनि नयाँ खबर थाहा पाइयो, फेसबुकका अरु साथीले पनि थाहा पाउन भनेर फेसबुकमा गरेको सेयर पनि लाइक नै हो ! तपाईले कुनै खबर लाइक गर्दा, मन परेको भन्ने अर्थ दिँदैन भन्दा हुन्छ, बरु यसले भन्छ ‘सेयर गर्नु’ ! चाहे खबर दुर्घटनाको होस् वा अरु केही लाइक गर्दैमा दुर्घटना मन परायो, मान्छे मरेको मन परायो भन्ने हुँदैन! तपाईले खबर थाहा पाउनु भयो, अनि “लाइक” थिचेर फेसबुकमा सेयर गर्नु भयो !
माथि, फेसबुक पेज र साइट/ब्लगमा देखिने ‘लाइक’ को कुरा भयो ! अब फेसबुकको स्टाटस, फोटो, भिडियो, नोट आदि इत्यादिमा गरिने ‘लाइक’को कुरो गरौँ ! कसैले फेसबुकमा रमाइलो घतलाग्ने कुरा लेख्यो भने, तपाई मन परेर ‘लाइक’ गर्नुहुन्छ ! अनि कसैले दूखद कुरा लेख्यो, सेयर गर्यो भने, “मैले थाहापाएँ” भन्ने कुरा मनन गरेर “लाइक” गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ, फेसबुकमा लेखिएका कुनै पनि नराम्रा/दुखद खबरहरु कसैले “मन पर्यो” भनेर ‘लाइक’ गर्दैन ! “मैल ग्यास नपाएर, २ दिन भयो घरमा खाना पाकेको छैन” भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेख्यो भने पनि उक्त स्टाटसमा ‘लाइक’ आउँछ, यसको अर्थ तपाईले ग्यास नपाएको कुरा, अरुलाई मन पर्यो भनेको होइन ! यसको अर्थ हुन्छ, “मैले थाहा पाएँ”, “मैले कुरा बुझेँ”, यस्तै यस्तै ! कसैको निधन भयो भनेर फेसबुकमा लिंक सेयर गरियो, फोटो, भिडियो, स्टाटस वा नोट नै अपडेट गरियो भने पनि, त्यसमा ‘लाइक’ आउँछ ! यसको अर्थ ‘निधनको खबर’ले खुशी लाग्यो भन्ने हुँदैन ! कसैको निधनको खबर फेसबुकमा लेखिएकोछ भने, अरुसँग प्राय: त्यसबेला सान्तवनाको लागि लेख्ने शब्द हुँदैन ! संसार यस्तै हो, सबैले एकदिन मर्नैपर्छ भनेर लेख्यो भने, पिडितलाई झन् पिडा नै थपिन्छ, भलै सबैलाई थाहा छ, मृत्यु अवश्यम्भावी हो तर पनि दूखको घडिमा फेसबुकमा त्यस किसिमको सान्तवनाको शब्द लेख्दा खासै सुहाउँदिलो लाग्दैन, बडो दार्शनिक जस्तो लाग्छ ! अत: मान्छेहरु सजिलो तरिका ‘लाइक’ क्लिक गर्छन् ! अर्थ प्रस्ट छ, मैले यो दुखद खबर थाहा पाएँ !
अनि कति कुरा चैँ आफूलाई मन परेरै लाइक गरिन्छ ! कसैले रमाइलो स्टाटस लेख्यो वा फेसबुकमा अपडेट गरिएको कुनै पनि कुराले चित्त बुझ्यो भने, मन परेर, घत लागेर, चित्त बुझेर, समसामयिक लागेर, “लाइक” गरिन्छ !
अहिलेको लागि फेसबुक लाइकको बारेमा यत्ति नै लेखेँ ! तपाईहरुलाई अझै केही कुरा छुटेको छ झैँ लाग्छ भने, तल कमेन्टमा ‘यस्तो हुँदा’ नि लाइक गरिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नो अनुभव पनि बाँड्न सक्नुहुन्छ । तपाईको फरक विचार छ भने, त्यो कुरा पनि लेख्दा हुन्छ है ! अनि यो ब्लग मन पर्यो वा अन्य केही भयो, सेयर गर्नुपर्यो भने माथिको ‘सेयर बटन’ वा तलको ‘रिकमेन्ड/लाइक’ बटन थिच्नसक्नुहुन्छ !
आकार पोष्टलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुस् :)
Dilip Acharya August 1, 2012 at 11:39 AM
कुरो सहि हो ! । लाईकको सीधा अर्थ गरेर त्यसलाई 'मन पर्‍यो' , 'राम्रो', वा 'ठीक छ !' मात्रै बुझ्नु भन्दा पनि 'ए!' , 'बुझेँ !' वा 'थाहा पाएँ' आदि अनेक अर्थमा बुझ्नु पर्छ ।
तर चित्त नबुझ्ने एउटा कुरो चाहीँ, फेसबुकले आदि-इत्यादि जे जेजस्तो ट्याव वा आइकन आदि बनाए पनि एउटा 'OK' , 'Got that!' वा 'informed!' भन्ने नयाँ जिनीस पनि थप्द्या भे' फेसबुकको के जान्थ्यो र हो ? । लाइकको धेरै अर्थ हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले माथी भनेजस्तै अरुले दुख परेको खबर लेख्दा 'थाहा पाएँ' को अर्थमा पनि लाइक गर्न अप्ठ्यारै लाग्छ .... सबैले यो लाइकको अर्थ बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् भनेर :)
I completely agree with you bro!
लक्ष्मण August 1, 2012 at 12:04 PM
हुन पनि हो ' लाइक ' पनि कति सम्म गर्न सकेको कुन्नी ! अस्ती एउटा लाइ यस्तो नराम्रो फोटो ट्याग नगर, फोहरी शब्द नलेख भनेर राणी******, माची*** , हुने न हुने शब्द लेखेर गाली गरेको थिए त्यो चोर फटहा लाइ मैले। साले कुकुरले त्यसलाइ पनि ' लाइक गरेर मरेछ हे हे हे उफ ! यो फेसबुक को ' लाइक '
Paresh Jogi August 1, 2012 at 12:04 PM
आकारजीले यो "लाइक"बारे लेख्नु भन्दा पहिला नै दिलीप सरले लेख्नु भएको जस्तो लाग्छ । फेरि एकपटक रिमाइन्ड भयो । सबैलाई धन्यवाद ।
Ekendra August 1, 2012 at 12:04 PM
मलाई चाहिँ Like को अर्थ येस्तो लाग्छ, Aakar Anil
(१) मलाई मन पर्यो (status+shares+page), (२) म एसको समर्थन गर्दछु (status & comments only), (३) म मनन गर्दछु (status & comments only)
Virtually there is no difference between Like and Recommend except the one for people's choice of the word.
The LIKE used by Facebook is noun (plural likes) as defined in MS Dictionary
preference: something that
is preferred over others
The RECOMMEND used isaverb, unlike LIKE. So, it determines the situation where to fit the best.
endorse somebody or something: to express approval of or support for a
Hsihsa Ianad August 1, 2012 at 12:04 PM
Ŝŭrësh Māharjân August 1, 2012 at 12:04 PM
gazzab chha baa :)
Pawanskfm August 1, 2012 at 12:04 PM
Deepesh Kayastha August 1, 2012 at 12:04 PM